ओलीलाई भेटेर फर्किएलगत्तै प्रचण्डले किन बोलाएर हाइकमाण्ड बैठक ? यस्तो छ कारण — Imandarmedia.com
ओलीलाई भेटेर फर्किएलगत्तै प्रचण्डले किन बोलाएर हाइकमाण्ड बैठक ? यस्तो छ कारण
उक्त निर्णयमा अध्यक्ष ओली र सचिवालयका अरु सदस्यबीच मत बाझिदै आएको छ । प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यलाभको अवस्थामा रहेकाले यावत बिषयका छलफल भने नहुने बताइएको छ । (कोरोना रोक्‍नका लागि मेडिकल सामग्री र चिकित्सक टोली पठाउन चीन तयार)
कोरोना भइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि आफ्नो मुलुकमा सफलता हासिल गर्दै आएको छिमेकी मुलुक चीनले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकलदेखि प्राविधिक जनशक्तिसहितको सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालका लागि के–के सामग्री र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यसबारे व्यवस्थित माग राख्न चीनले भनेको हो ।
भाइरस प्रभावित अन्य मुलुकहरूलाई सहयोगको मात्रा बढाइरहेको चीनले नेपालमा पनि सम्भावित महामारी रोक्नका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको हो । कोरोना भाइरस रोग रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका अनुसार चीनले सहयोगका सम्भावित क्षेत्रबारे पनि उल्लेख गरेको छ ।
ऊर्जा, मास्क, मेडिकल सामग्री र मेडिकल टिम पठाउनेसम्मको प्रतिबद्धता चीनबाट आएको छ । त्यस्तै भाइरसको संक्रमण घट्नेबित्तिकै नेपालले चाहे चिनियाँ पर्यटकहरूको आगमन पनि अरूभन्दा पहिले खुला गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि नेपालले चाहेको समयमा गति दिन तयार रहेको सूचना चीनले पठाएको छ ।
‘यस्तो गर्ने हो भने तुरुन्त माग होस्, हामी तत्पर छौं भनेर चिनियाँ पक्षबाट हामीलाई आश्वासन आएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मंगलबार भने, ‘हामी पनि संक्रमण नफैलियोस् भनेर लागेका छौं र आवश्यक पर्ने सबै खालका सहयोग लिन्छौं ।’
‘असल छिमेकीको हिसाबले हाम्रो क्षमताअनुसार हामी नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छौं,’ चिनियाँ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालबाट के–के कुरा चाहियो भन्ने प्रस्ताव पठाएपछि त्यसको आधारमा हामी सहयोग पठाउँछौं ।’ केही दिनअघि सार्क राष्ट्रहरूबीच पनि कोरोनाविरुद्ध साझा प्रयास अघि बढाउने सहमति भएको थियो । आठवटै मुलुकहरूबीच गत आइतबार भएको भिडियो कन्फरेन्समा कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि साझा कोष बनाउने सहमति पनि भएको थियो ।
उक्त कोषमा भारतले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सार्क राष्ट्रसँगको संयुक्त प्रयास भए पनि चीनले भने आफ्नो छिमेकी सम्बन्ध आधारमा नेपाल केन्द्रित सहयोगको इच्छा देखाएको हो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सार्कको विपत् व्यवस्थापन कोषमा रहेको पैसा पनि अहिले भइरहेको महामारीको नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) चीनमा नियन्त्रणोन्मुख भइरहँदा युरोप र अमेरिकामा भने फैलिइरहेको छ । गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ अहिले विश्वका १६० भन्दा बढी देशमा फैलिइसकेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा फ्रान्समा २७, अमेरिकामा २३, नेदरल्यान्ड्समा १९, बेलायतमा १६, जर्मनीमा ९, स्विजरल्यान्डमा ८, दक्षिण कोरियामा ६, क्यानडामा ४, मलेसिया, इजिप्ट, इन्डोनेसिया र सान मारिनोमा २–२ जना तथा अस्ट्रिया, स्विडेन, जापान, पाकिस्तान, पोल्यान्ड, इराक, भारत, लेबनान, टर्की, अल्जेरिया, मोरक्कको र युक्रेनमा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वका विभिन्न देशमा गरी ८ सय ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने थप १५ हजार ७ सय ६७ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।